Warar | Radioandalus24
Wararka ka imaanaya Sh hoose ayaa sheegaya in weerar qarax ah lagu bur buriyay gaari Taw ah oo ay leeyihiin ciidanka Kuffaarta Afrikaanta. Gaariga ayaa ku istaagay miino dhulka loogu aasay taasoo sababtay in gaariga uu gabi ahaanba bur buro oo askartii saarneydna ay dhimasho Iyo dhaawac noqdaan. Saraakiisha dhanka miinooyinka ee mujaahidiinta ayaa Andalus […]
Barqanimadii maanta ciidamo ka tirsan guutada madaafiicda Mujaahidiinta ayaa weerar madaafiic ah ku garaacay xarunta Filla Somaliya oo saldhig u ah hoggaanka murtadiinta Somaliya. Ilaa 8 madfac ayaa la xaqiijiyay inay gudaha u galeen xarunta kuwaasoo suura gal ay tahay inay geyteen khasaare kala duwan oo gaaray maleeshiyaadka ilaalada ka ah xaruntaasi. Masuul ka tirsan […]
Saaka ayaa gaadiid iyo ciidamo xoog leh oo ka tirsan Kenya waxay soo dhoobteen degmada Baladxaawo iyagoo isu diyaarinayay inay dhisaan darbi kala qeybiyay dhulka somalida ay leedahay. Darbigaasi ayay Kenyatiga ka dhisayaan gudaha degmada Baladxaawo iyagoo kasoo gudbay xuduudbeenaadka,marka ay bilaabeen dhaq dhaqaaqii dhisitaanka ayaa boqolaal shacab ah waxay ka dhiidhiyeen arinta darbi dhisidda. […]
Cutubyo hubeysan oo ka tirsan ciidanka Mujaahidiinta ayaa xalay weerar culus ku qaaday fariisin maleeshiyaadka jawaasiista ay ku leeyihiin xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada Muqdisho. Dagaalka oo ahaa mid aad culus la isuna adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayay mujaahidiinta ku beegsadeen fariisinka maleeshiyaadka oo lagu hardamay in muddo ah. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u […]
Saaka waxaa ciidanka Mujaahidiinta ay jidka u galeen kolono gaadiid ah oo ay leeyihiin ciidanka murtadiinta ah ee ka amar qaata Mareykanka loogu yeero Bangaraaf. Kolonyadaasi ayaa waxay kasoo baxeen garoonka Ballidoogle waxayna kusii jeedeen magaalada Muqdisho,marka ay marayaan inta u dhaxeysa Wanlaweyn iyo Afgooye ayay la kulmeen weerar culus. Dagaal aad u qaraar ayaa […]
Iyadoo galabra weerar jidgooyo ah loo dhigay kolonyo gaadiid Afrikaan ah oo kasoo baxay Muqdisho kuna sii jeeday Shalambood ayaa waxaa mar kale qarax lala eegtay isla kolonyadii galabta la beegsaday. Gaadiidka Afrikaanta oo marayay Buufoow Bacaad ayaa waxaa lala eegtay qarax miino oo dhulka loogu sii diyaariyay kaasoo si rasmi ah u haleelay gaariga. […]
Duhurnimadii maanta ayaa ciidamo ka tirsan Kuffaarta Afrikaanta oo kasoo baxay magaalada Muqdisho waxaa weerar lagula eegtay deegaanka lagu magacaabo Jiiro Gaaljecel oo u dhaw deegaanka Lambar 60. kolonyadan gaadiidka ah ayaa lagu bilaabay hubka culus iyadoo kadibna uu xigay dagaal culus oo faraha looga gubtay socdayna ku dhawaad 30 daqiiqo. Muddo weerar iyo weerar […]
Kolonyo Isugu Jirta Mareykan Iyo Maleeshiyaad Wada Socda Oo Lagu Beegsaday Duleedka Boosaaso.
Wararka ka imaanaya deegaanka Galgala ee duleedka Boosaaso ayaa sheegaya in weerar qarax ah lala eegtay kolonyo ka koobneyd Mareykan Iyo Maleeshiyaad oo marayay duleedka Boosaaso gaar ahaan deegaanka Galgala. Kolonyada ayaa waxaa lagu qarxiyay miino dhulka lagu aasay taasoo sababtay dhimasho iyo dhaawac gaaray askar iyo saraakiil ka tirsanaa maleeshiyaadka asha haada la dirirka. […]
Weerar Khasaare Lagu Gaarsiiyay Ciidanka Amxaarada Ayaa Galabta Ka Dhacay Duleedka Baladweyne.
Kolonyo ciidamo Amxaaro ah oo kasoo baxay dhanka Feerfeer kuna soo jeeday magaalada Baladweyn ayaa la kulmay weerar culus oo dhabbo ah oo ciidanka mujaahidiinta ay u dhigeen. Weerarka ayaa si gooni ah wuxuu kaga dhacay deegaanka lagu magacaabo Ceel Muslim halkaasoo ay ku hardameen mujaahidiinta iyo cadowga,dagaal la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan […]
Maamulka Farmaajo Oo Xarigii Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur Ku Tilmaamay Mid Sharci Ah Digniinada U Diray Siyaasiyiin.
Kooxda ridada SOmaliya ayaa maalmahan waxaa soo foodsaarayay khilaafaad iyo ismariwaa dhexdooda ah taasoo keentay in la weeraro guri uu deganaa Siyaasi Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur. Weerarkii Xalay iyo xarigii murtadkaasi waxaa war kasoo saaray kooxda ridada iyagoo sheegay in ay xabsiga dhigeen siyaasigaasi baaritaanana ay ku hayaan sidoo kalena ay ka shakiyeen inuu abaabulayay […]
Askar ka Tirsanaa Maamulka Cabdi Wali Gaas Oo Lagu DIlay Boosaaso.
Barqanimadii maanta ayaa ciidamo hubeysan oo ka tirsan mujaahidiinta waxay hawl gal ka sameeyeen gudaha magaalada Boosaaso. Hawl galka ayay ku beegsadeen mujaahidiinta askar murtadiin ahayd oo ka tirsanaa waaxda Canshuuraha ee maamulkaasi waxaana mujaahidiinta ay ka toogteen qeybaha sare ee jirka. Goob joogayaal ayaa soo sheegay in mujaahidiintii dilka geystay ay si nabad galyo […]
Jaasuus Ka tirsanaa Murtadiinta Farmaajo Oo Qaab Qorsheysan Loogu Dilay Muqdisho.
Xalay waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda Suuqa Xoolaha ka dhacay dil qorsheysan oo lagu beegsaday askari ka tirsanaa jawaasiista murtadiinta ee kooxda Farmaajo. Askarigan oo ku shaqeysan jiray Mootada Bajaajta ayaa murtadiinta u qaabilsanaa soo aruurinta xogaha muslimiinta waxaana markii lasoo ogaaday macluumadiisa ugu dambeyntii xalay lagu khaarijiyay suuqa Xoolaha isagoo watay mootadiisa. Ciidankii […]
Askari Ka Tirsanaa Murtadiinta Oo Lagu Dilay Degmada Mahadaay Qorigiina Laga Furtay.
Degmada Mahadaay ee ka tirsan Sh dhexe waxaa saaka waaberigii ka dhacay weerar qorhsheysan oo ay fuliyeen ciidanka mujaahidiinta ee ka hawl gala gudaha degmadaasi. Hawl galka oo ahaa mid qitiyaal ah ayaa lagu beegsaday askari murtadiinta ka tirsanaa waxaana laga toogtay qeybaha sare ee jirka isla goobtaas ayuuna ku nafbaxay siday noo xaqiijiyeen saraakiisha […]
Weerar Culus Oo Xalay Lagu Qaaday Fariisin Maleeshitaadka Puntland Ay Ku leeyihiin Buuraha Galgala.
Wararka ka imaanaya buuraleyda Goolis ayaa sheegaya in xalay cutubyo ka tirsan ciidanka mujaahidiinta ay weerar culus ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin tuulada Galgala. Dagaalka oo ahaa mid aad u culus ayay ugu horreyn mujaahidiinta ku bilaabeen madaafiic culus kadibna waxaa xigan dagaal toos ah oo la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala […]
Dhageyso: Sheekh Abuu Muscab Oo Faah Faahiyay Weerarkii Iskoola Boliisiyo.
Taliska ciidanka Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa Faah Faahin dheeri ah ka bixiyay weerar istishhaadiyo ah oo maanta ka dhacay Xerada Iskool Boliisiyo ee magaalada Muqdisho. Sheekh Cabdi Cabdi Caziiz Abuu Muscab oo ah Afhayeenka Mujaahidiinta ayaa wareysi uu siiyay idaacadda Andalus wuxuu uga hadlay khasaaraha ka dhashay weerarkii Iskoola Boliisiyo. “Saaka aroortii hore halkii la […]
Warbixin dhammaystiran oo laga diyaariyay camaliyaddii istishhaadiga ahayd ee ka dhacday Muqdisho.
Geesi ka mid ah guutada Istish-haadiyiinta ayaa subaxnimadii hore ee saaka isagoo Allaah tala saaranaya weerar halyeeynimo ku qaaday xero ciidan oo ku taalla meel u dhow Dakada magaalada Muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan Mujaahidiinta. Howlgalkan ayaa lagu beegsaday xero lagu diyaarinayey boqolaal ciidamo Police ah oo la filayey in ay qeyb […]
Weerar Qarax Ah Oo Lagu Beegsaday Maleeshiyaad Ku Sugnaa Xarunta Iskuul Buliziiya Iyo KHasaare Ka Dhashay.
Saaka aroortii ayaa mar qura waxaa qarax xoog leh laga maqlay gudaha xarunta Iskuul buliziiya oo ah xarun ay ku taba bartaan ciidamada murtadiinta kuwooda booliska ah. Qaraxa ayaa dhacay waqti ay safaf ku jireen maleeshiyaadka kuwaasoo loo maleynayo inay isu diyaarinayeen tababar waxaana halkasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah. Saraakiisha mujaahidiinta ayaa […]
Daawo: Mu’asasadda Alkataaib oo baahisay Filim Xiiso badan واغلظ عليهم2
Filimkan oo ah qaybtii 2aad ee taxanaha واغلظ عليهم ayaa si rasmi ah loogu baahiyay baraha internetka. Filimku dhammaantii wuxuu ka hadlaya weerarkii Mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhig Murtadiintu ay ku lahaayeen magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo, wuxuuna ka koobanyahay labo qaybood oo ah mid Soomaali ah iyo mid carabi ah. Halkan Kala Dag Filimka